မေမေတို့ အိမ်မှာသားငယ်သမီးငယ် လေးတွေ ထမင်းသိပ်မစားလို့ စိတ်ညစ်နေရင် ဒီနည်းလမ်းလေးတွေ သုံးကြည့်ပါ။ – Burmese Baby
Web Master | September 18, 2017 | Articles, Food | Comments
1. ကလေးတွေ က စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်အရမ်းများတဲ့ အတွက် သူတို့လေးတွေကို ကိုယ်တိုင် ထိတွေ့ကိုင်တွယ်စားခိုင်းပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုင်စားမယ့် လက် တွေ ဇွန်း တွေကိုတော့ သန့်ရှင်းအောင် ဆေးကြောပေးဖို့တော့လိုပါမယ်။ ဒါမှ လည်းကလေး က ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်လာပြီး ပိုပြီးလည်း ထမင်းစားပိုဝင်တယ်လို့ သုတေသန တွေ့ရှိချက်များက ရေးထားပါတယ်။
2. ကလေး တွေ ထမင်းစားနေရင် ဘေးကနေ မေမေ ဖေဖေ တို့ က သူစားနေတာ ဘာအသား ဘာအရွက် အဲ့ဒါ စားရင် သူ့အတွက် ဘယ်လို အကျိုးရှိတယ် ဆိုတာလေးကို ပြောပြောပေးခြင်း အားဖြင့် ကလေးင်ာတွေ ပာာ သူတို့ အတွက် ဗပာုသုတ အသစ်အသစ် တွေ ရရှိစေတဲ့ အပြင် မိသားစု နွေးထွေးမှု့ကို ပါ ခံစားရတဲ့အတွက် ထမင်းစားပိုဝင်ကြပါတယ်။
3. ကလေးတွေ အတွက် ထမင်း ပန်းကန် ပြင်တဲ့ အခါ မှာ သူတို့ ကုန်နိုင်မယ့် ပမာဏ ကို ပဲ ထည့်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျ ဆိုပြီး ကလေး စားနိုင်ထက် ပမာဏ ထက်အများကြီး ပန်းကန်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ရင် ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲ မှာ ဒါသူတို့ မကုန် နိုင်လောက်ဘူးဆို ပြီး စစားထဲ က စိတ်မပါ လက်မပါ ဖြစ်တတ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ ကုန်နိုင်လောက်တဲ့ ပမာဏ ပဲထည့်ပေး ခြင်းပာာ ကလေး ငယ်တွေ စိတ်ထဲ သူတို့ စားလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆကြတဲ့ အတွက် သူတို့လေးတွေ ကပိုပြီးတော့တောင် စားချင်စိတ်ဖြစ်လာ တတ်ကြပါတယ်။
4. ကလေးတွေ ကို ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေးတဲ့ အခါ မှာ လည်း သူတို့ စိတ်ဝင်စားမယ့် ပုံလေးတွေ ဖော်ပြီးကျွေးတာ၊ အလှ ပုံလေးတွေ ဖော်ပြီး ကျွေးတာ ကလည်း ကလေးငယ်တွေ ကို အစာစားချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
5. နောက်ဆုံးတစ်ခု အရေးကြီးတာ က ကလေးတွေ က ဗိုက်ပြည့်သွားပြီ ဆက်မစားချင်တော့ဘူးလို့ ပြောနေချိန်မှာ မေမေ တို့ အနေနဲ့ အတင်း စွတ်ကျွေးတာမျိုးမျိုး ကြိမ်းမောင်းပြီးကျွေးတာမျိုးက အရမ်းမှားပါတယ်။ ကလေးတွေ ပာာ လူကြီးတွေ နဲ့ မတူတဲ့ အချက် က သူတို့ က အားနာစာ နှမြောစာ ရယ်ဆိုပြီး ဗိုက်ပြည့်သွားလည်း နှမြောပြီး အားနာပြီး ဆက်စားတာမီုးမရှိတဲ့ အတွက် သူတို့ ဗိုက်ဝ နေတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ချမ်းသာအောင် ဆက်မကျွေးပါနဲ့။ သေချာပါတယ် နည်းနည်းပဲ စားထားတဲ့ ကလေး က ခဏနေတာ နဲ့ ဗိုက်ဆာ တယ် တန်းပြောမှာပါ။ အဲ့လိုမျိုး သူတို့ ဗိုက်ဆာ မှ ကျွေးကျွေးပေးတာမျိုးကလည်း ကလေးတွေ ကို အစားကို ဝင်စေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူတို့စိတ်ထဲ မှာ သူတို့ စားချင်သလောက်ပဲ စားလို့ရတယ်။ မကုန်ရင်လည်း အပြစ်ပေးတာ ဆူတာ တွေ မရှိတော့ဘူးဆို ပြီး သူတို့ စားချင်တဲ့ အချိန်တိုင်း မေမေ တို့ကို ပြောဖို့ ဝန်မလေးတော့တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
ဒါကြောင့် အထက်ပါ ဖော်ပြထားတဲ့ ကလေးငယ်များ အစားစားချင်စတ်ကို ဖြစ်စေတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်း များကို အသုံးပြုပြီး ကလေးငယ်များ အစားကောင်းကောင်း စားအောင် ဖေဖေ မေမေ တို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။
fried prawn ball Recipe